World's Air Pollution: Heerka tayada hawada ee waqtiga dhabta ah
Fadlan sug intaad ku dhajin laheyd xogta tayada hawada ee waqtiga dhabta ah
Cabirka Tayada hawada
Caafimaad darro maaha kooxaha xasaasiga ah
Caafimaad aan fiicnayn
Websaydh waxaa laguu soo diray mashruuca 'Index Air Quality Index'
Khariidadda kore waxay muujineysaa tayada hawada ee wakhtiga dhabta ah ee loogu talagalay in ka badan 10,000 xarumood oo adduunka ah.
La wadaag: Sidee hawada loo nadiifiyaa hawada maanta? Ka fiiri khariidadda hawada wasakheysan ee waqtiga-dhabta ah, in ka badan 80 dal.
Ma ka heli kartaa magaaladaada khariidada?
Aynu helno xarunta ugu dhow
Ma rabtaa saldhiga kormeerka tayada hawada kuu gaarka ah
Saldhigyada kormeerka tayada hawada ee GAIA waxay isticmaalaan dareerayaasha qaybta tiknoolajiyada sare ee laser si ay u cabbiraan qashinka PM2.5 dhabta ah, taas oo ah mid ka mid ah wasakhda hawada ugu waxyeelleysa.
Aad u fududahay in la dhiso, waxay u baahan yihiin kaliya meesha WIFI iyo adeegga korontada ee USB. Marka la isku xidho, heerarka hawada ee hawada ayaa si dhakhso ah loo soo sheegaa waqtiga dhabta ahna khariidadaheena
Hesho saldhigga kormeerka tayada GAIA ee hadda ah!
Mashruuca Mashruuca tayada Tayada Dunida
Sida loo isticmaalo codsigan shabakadda
Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan magaalo gaar ah, u dhaqaaq dhaqaaqaaga mid ka mid ah calammadaha ku yaal khariidada kor ku xusan, ka dibna riix si aad u hesho xogta taariikhiga ah ee wasakheynta cimilada.
Wanaagsan Caafimaad darro maaha kooxaha xasaasiga ah Caafimaad aan fiicnayn
Dhexdhexaad Caafimaad darro Halis ah
Xisaabinta tayada hawada (AQI) Xisaabinta
Heerka tayada hawadu wuxuu ku salaysan yahay cabiraadda walxaha waxyeellada leh (PM2.5 iyo PM10), Ozone (O3), Nitrogen Dioxide (NO2), Sulfur Dioxide (SO2) iyo Carbon Monoxide (CO). Inta badan saldhigyada khariidadu waxay kormeerayaan xogta PM2.5 iyo PM10 labadaba, laakiin waxaa jira dhawr waxyaalood oo ka reeban oo keliya PM10 keliya.
Dhamaan cabirada waxay ku saleysan yihiin saacadaha saacadaha akhriska: Tusaale ahaan, AQI ayaa ka warbixisay 8am micnaheedu waa in cabbirka laga sameeyey 7am illaa 8am.
Warbixin dheeraad ah iyo xiriiro
Ma rabtaa inaad iska ilaaliso nadaafadda hawada?
Fiiri boggeena maaskeelka iyo bogga nadiifiyaha hawada.
Ma rabtaa inaad ogaatid more Pollution Air?
Fiiri bogga Su'aalaha Suufka ah ee Soogaleysan.
Ma rabtaa inaad aragto qiyaasta hawada ee Pollution?
Fiiri boggeena Forecast.
Ma rabtaa in aad wax badan ka ogaatid mashruuca iyo kooxda?
Hubi bogga xiriirka.
Ma dooneysaa inaad hesho xogta tayada hawada iyada oo loo marayo API barnaamijka?
Hubi bogga API.
Ma rabtaa inaad martigeliso saldhiga kormeerka hawada?
Fiiri bogga Jadwalka Kormeerka.
Ma ku hadlaysaa Soomaali?
Waxaan ubaahanahay caawinaaddaada si aad u turjunto boggan.
Qiyaasta AQI ee loo isticmaalo in lagu muujiyo wasakheynta dhabta ah ee khariidadda kor ku xusan waxay ku salaysan tahay heerka ugu dambeeyay US EPA, iyadoo la adeegsanayo foomka warbixinta Instant Cast.
IQA Saameynta Caafimaadka Qoraal digniin ah
0 - 50 Wanaagsan Tayada hawada waxaa loo tixgeliyaa qanacsanaanta, iyo hawada wasakhda hawadu khatar yar tahay ama khatar kuma jirto Midna
50 - 100 Dhexdhexaad Tayada hawada waa mid la aqbali karo; Si kastaba ha noqotee, qashinka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jiraan walaac caafimaad oo dhexdhexaad ah oo ah tiro aad u yar oo dadka ah oo aan caadi aheyn xasaasiyad hawada. Carruurta iyo dadka waaweyn ee firfircoon, iyo dadka qaba cudurka neefsashada, sida neefta, waa in ay xaddidaan culeyska dheeraadka ah.
100 - 150 Caafimaad darro maaha kooxaha xasaasiga ah Xubnaha kooxaha xasaasiga ah waxay la kulmi karaan saameyn caafimaad. Dadwaynaha guud maaha inay saameyn ku yeeshaan. Carruurta iyo dadka waaweyn ee firfircoon, iyo dadka qaba cudurka neefsashada, sida neefta, waa in ay xaddidaan culeyska dheeraadka ah.
150 - 200 Caafimaad darro Qof kasta wuxuu bilaabi karaa inuu la kulmo saameyn caafimaad; xubnaha kooxaha xasaasiga ah waxay la kulmi karaan saameyn caafimaad oo culus Carruurta iyo dadka waaweyn ee firfircoon, iyo dadka qaba cudurka neefsashada, sida neefta, waa in ay ka fogaadaan feejignaanta dibadda; Qof kasta oo kale, gaar ahaan carruurta, waa in ay xaddidaan jimicsiga dibadda ah
200 - 300 Caafimaad aan fiicnayn Digniinta caafimaad ee xaaladaha deg-degga ah. Dadka oo idil waxay u badan tahay inay saameyn ku yeeshaan. Carruurta iyo dadka waaweyn ee firfircoon, iyo dadka qaba cudurka neefsashada, sida neefta, waa in ay ka fogaadaan dhammaan hawlaha banaanka; Qof kasta oo kale, gaar ahaan carruurta, waa in ay xaddidaan banaanka dibadda.
300 - 500 Halis ah Heeganka caafimaadka: qof kastaa wuxuu la kulmi karaa waxyeelo caafimaad oo culus Qof kasta waa inuu ka fogaadaa dhammaan hawlaha banaanka
Dhammaan dhibcooyinka waa in ay tagaan EPA (Wakaaladaha Ilaalinta Diiwaangelinta), maaddaama dhammaan shaqadani ay suurtogal tahay in ay suurtogal u tahay shaqadooda. Eeg bogga liiska EPA ee guud ee adduunka.
Magaalooyinka leh qashinka hawada ugu xun ee hadda jira
10ka dal ee ugu sareeya heerka ugu xun ee hawada wasakhda ah
Dhammaan xogta tayada hawadu waa mid aan loo baahnayn xilliga daabacaadda, iyo iyadoo tayada hubinta tayada xogtan laga beddeli karo, iyadoon ogeysiis, wakhti kasta. Mashruuca Tayada World Air Index wuxuu fuliyey xirfad macquul ah iyo taxaddar ah oo ku saabsan waxyaabaha ku jira macluumaadkaan iyo duruufaha jirin, kooxda mashruuca "Quality Air Index Index" ama wakiiladoodu waxay masuul ka yihiin qandaraaska, cadaymaha ama wixii kale ee lumay, dhaawac ama waxyeelo si toos ah ama si aan toos ahayn uga soo baxa bixinta macluumaadkaan.